VaTsvangirai Vokurudzira SADC Kutumidzira Vanochengetedza Runyararo Munguva dzeSarudzo
Gumiguru 20, 2010
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti SADC inofanirwa kutumira mauto kuZimbabwe kuitira kuti azochengetedza runyararo mugadziriro yesarudzo dziri kurongwa gore rinouya. Asi VaTsvangirai vanotiwo havasi kuzopinda musarudzo dzakatarisirwa kuitwa kana sarudzo idzi dziine mhirizhonga.
Va Tsvangirai vakataura mashoko aya neChipiri manheru pamusangano wavakaita nevatsigiri vavo mumusha weMabvuku muHarare.
Va Tsvangirai, avo vakaramba kupinda musarudzo dze runoff muna 2008 nepamusana pemhirizhonga, vari kukurudzira SADC kuti itumire mauto anochengetedza runyararo pamberi pesarudzo idzi.
Asi mutauriri we Zanu PF, VaRugare Gumbo, vanoti hapana chikonzero chekuti SADC itumire mauto aya sezvo vachiti hapana mhirizhonga ichaitika. Va Mugabe vakaudza vechidiki vebato ravo svondo rapfuura kuti havadi kunzwa nezvemhirizhonga musarudzo dzichauya vachiti vanoda kuhwina zviri pachena.
Zvichitevera kudomwa kwemagavhuna e Zanu PF chete pamwe nevamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika kwakaitwa naVa Mugabe vasingatevedzere zvavakawirirana nevamwe vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa, VaTsvangirai vanoti kuita kwaVaMugabe uku kwava kuita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka muhurumende.
Va Tsvangirai vanoti nekuda kwezvakaitwa naVaMugabe, bato ravo rava kuda kuti zvose zvarange rasendeka parutivi zvine chokuita nemisariridzwa yechibvumirano chezvematongerwo enyika, zvizadziswe.
Panyaya yekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, Va Tsvangirai vanoti misangano yekubvunza vanhu zvavanoda kuti zvive mubumbiro iri ichadzokororwa munzvimbo dzose dzakaitwa mhirizhonga uye vaikonzeresa mhirizhonga iyi vanofanirwa kusungwa misangano iyi isati yadzokororwa.
Va Tsvangirai vakakurudzira vanhu vese vasina kunyoresa kuvhota kuti vanyorese nekukasika kuitira kuti vagokwanisa kuvhota pachaitwa sarudzo gore rinouya. Vanoti sarudzi idzi dzinofanira kuitwa pave negwaro idzva remaziva evanhu vanokodzera kuvhota, kana kuti voters roll.
VaMugabe naVaTsvangirai vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa gore rinouya mushure mekunge referendamu yaitwa uye Va Tsvangirai vanoti hurumende yemubatanidzwa haifanire kuramba iri pachigaro kwenguva refu